आऊ हामी अपराध गरौं | मझेरी डट कम
kbs — Tue, 07/22/2008 - 21:23
बाँच्नु पनि पुरुषार्थ हो भन्नेहरूलाई देख्दा म अपराध बोध गर्न थाल्छु । साँच्चि बाँच्नु भनेको पाप भर्नलाई हो - कति गम्भीर प्रश्न । उत्तरका निम्ति आफ्नै अहम्सँग ठोकिन्छु र व्यग्र हुन्छु ।
म यसलाई मर्न नसक्नेहरूको हरुवा तर्क भन्छु । यथार्थ त कसैलाई मार्नु पर्दाेरहेछ । कस्तो विडम्बना ! अपहरण नगरी सुन्ने होइन । बन्द नगरी कसैले र्टर्ेनै छाडिसके । बिनातोडफोड उजुरी लाग्दैन । होइन के भएछ अचेलका मान्छेलाई -
मलाई लाग्दैन पाप गर्नलाई म जन्मेको हुँ । तर पाप नगरी बाँच्न सक्तिन । दुराचारी हुनलाई बाँचेजस्तो बाँचेकाहरू देख्दा होइन भनी प्रतिकार गर्न सकिन । प्रत्युत्तरको अभावमा निरुत्साहित म यसैलाई उत्तर ठानेर निष्कर्षनिकाल्छु । म हत्यारालाई अपराधी भन्दिन किनभने बाँच्ने हो भने उसले कसैलाई मार्नर्ुपर्छ । यो विवशतामा जो पनि ज्यानमारा भइदिन्छन् भने कसरी अपराधी भन्ने - बरु सहानुभूति गर भन्छु ।
म चोरलाई दोषी भन्दिन । चोर हुन्छु भनेर कहाँ कोही चोर भएका हुन्छन् र - भीख मागेर उसले कम्तीमा त्यसभन्दा निन्दनीय काम गरेन । कसैको आश्रयमा बाँचेर शरणार्थी हुनुभन्दा चोर हुनु साहसिलो काम हो ।
अनैतिक आचरण गर्नेलाई चरित्रहीन भनेर किन अपमानित गर्ने - तिमीले भनेजस्तो ठूलो बाँच्नु हो । आत्महत्यालाई अपराध मानेर हुतिहारा हुनुभन्दा बाँच्नलाई जे पनि गर्न सक्नर्ुपर्छ । यो गर, त्यो नगर भनी उपदेश गर्ने तिमी को हौ - आफैंलाई त्यसअनुसार सच्याएर डोर्‍याएको भए कहाँ पुगिसकिन्थ्यो । दोष दण्डित हुनेहरूको होइन, त्यस्तो समाज रच्नेहरूको हो जहाँ अपराध नगरी बाँच्दैनौं ।
भनूँ भने अपराध के हो, केलाई भन्छन् थाहा छैन । कस्तो हुन्छ, कुन रङ्गको हुन्छ, हुलिया नभएकाले अमर्ूत चित्र जस्तो लाग्छ- आकाश जतिकै व्यापक, देश भएर फैलिदिएको छ । तैपनि आदेश जारी गर्छन् । दोषी ठहर्‍याएर दण्डित हुन्छन् बात लागेकाहरू । पाप नगरी बाँचेका छैनौं भने कसैलाई अपराधी भन्नु निरपराधी हुन खोज्नुमात्रै हो ।
मलाई सोध्छौ भने स-साना नानीजस्तो निष्कलंक कोही छैन । कसैको अनुहारमा बालकको जस्तो हाँसो देख्दिन । गंगाजलीय अनुहारजस्तो पवित्र पनि देखिन । हर्ेदाहर्ेदै वाग्मती दर्ुगन्धित भएजस्तै भइसकेछौं । देख्दादेख्दै वातावरण प्रदूषित भएजस्तै बिटुलिएछौं । मिसावटी खाद्यवस्तुजस्ता छौं हामी
त ! टीभीमा धुल्याउनलाई फ्याँकेको कुहेको चामल खोसाखोस गरिरहेका मानिसको भीड देख्दा नेता, पार्टर्ीीको पदमोह अनिकालको त्यही अन्नभन्दा कम लागेन । कहाँ गएछ हाम्रो वर्तालु निष्ठा - खै त्यो सहिदी र्समर्पण - सिद्धार्थी त्याग र गान्धी आचरण -
आफ्नै लागि मर्ने-मार्नेहरूको भीडमा अपाहिज देश हिंड्नै सकिरहेको छैन । जहिले हेर बाटा मान्छेजस्तै अपहृत भइदिन्छ । कैदी हुन्छौं आ-आफ्नै थलोभित्र । विध्वंसको सुनामी लहर थामिने नामै छैन । जलिरहेको निर्माण र उद्योगधन्दाको आगो तापेर लोकतन्त्र हर्ुकाउन व्यस्त छौं । संक्रमण भन्ने गरेको याम त सबैको बाली भित्र्याउने मौसम पो भइदिएछ । सबै वर्ग, जातजाति, सबै क्ष्ँेत्र-भाषाभाषी, के दलित महिला, के पेसाकर्मी मधिसे आ-आफ्ना हकहितको रोपाइँमा तल्लीन छन् । भोलि अधिकारविहीनको भुखमरी खेप्नु पर्ला भन्ने डरले होला राजधानी व्रि्रँेहीहरूको तपोभूमि भइसक्यो । माओवादी पनि आफ्ना फुच्चाफुच्चीलाई होमेर अश्वमेध यज्ञ गर्ने तयारीमा छन् । अनि यहाँका सडक, मन्त्रालय, पार्क, अड्डाखाना, सिंहदरबार, मण्डला सबै दोबाटो, सबै चौबाटो खेतमा परिणत हुन्छ । हकहितका नारा घन्किरहेको आवाजले रोपाइँ यामको असारे गीत सम्झाइदिन्छ ।
बाँच्न खोज्नेहरूको अग्रगामी पाइला भन्छु यसलाई हातमुख जोर्नेहरूको फिरादपत्रजस्तो पनि, वषर्ाैंदेखि दबिएको असन्तोषको टाइमबमजस्तो पनि । भन्नेहरू नयाँ इतिहासको आरम्भ भन्छन् । हामी भुच्चुकहरूलाई के के न पायौं भन्ने नलागेको होइन । तर सधैं परम्परा भएर दोहोरिने विडम्बनाबाट कहिल्यै मुक्त भएनौं । लाग्छ यो सुरुवातको अन्त छैन । मात्रै दोहोरिने गर्छ, खालि तुहिरहन्छ ।र्
धर्म लाग्ने निर्ण्र्ाारू बेठीक थिएन । अधर्म लाग्ने सोचजस्तो अनुचित नलागिदिएको पनि होइन । यसरी निर्रथक काम कति भइदिएका छन् जिन्दगीमा, निर्रथक आन्दोलन पनि भइदिएका छन् इतिहासमा । कसैले के पाएर मौका छोपेहोलान् । कसैले के भएर जिन्दगी सपारे होलान् । पापकर्ममा सहभागी भई पल्केकाहरू फेरि फेरि आन्दोलित हुन्छन्, क्रान्ति गर्छन् । फेरि अर्काे आन्दोलनको अश्वमेघी घोडा तयार छ अभियानमा हिंड्नलाई ।
यहाँ अलिकता व्याख्याको आवश्यकता देख्छु । जसलाई हामी धर्म भन्छौं नि, पाप ठान्छन् उनीहरू । उनीहरू जसलाई पाप भन्छन् हामी धर्म मानेर उछितो गर्छर्ाा । तर पाप गएको पनि होइन, धर्म लागेको पनि होइन । अपराध गर्न उस्क्याइदिनेहरू यसैलाई धर्म सम्झेर पाप गरिरहे । क्रान्ति, आन्दोलन, व्रि्रोह त उनीहरूका निम्ति अपराध ठहरिन्छ पाप जत्तिकै अस्पृश्य । यो अपराध भनेर आरोपित आन्दोलनहरू पनि हाम्रँे भएन । त्यसमा सहभागी थिएनौं नभनौं । यसरी लुछाचुँडी, आत्मघात, निष्कासन, धोखा, भ्रष्टाचारको हिलोमा मात्रै दबिनरहेर लखेटिन्छौं गाउँगाउँबाट, बस्तीबस्तीबाट । बीभत्स मृत्यु भरे निरपराधीहरू । दर्ुर्व्यवहारको प्रतिशोध गर्नेहरू पनि घृणा, बहिष्कारको आगो सल्काएर मान्छे मार्दैछन् । उचित सम्बोधनको अभावमा घाउ क्यान्सर भइदिँदो रहेछ ।
जंगलबाट सहर पस्यौं । भूमिगतबाट र्सार्वजनिक भयौं । बन्दुक बिसाएर बोधिवृक्ष्ाको सुवासले गन्ध पखाल्न खोज्यौं । बारुदको गन्ध न हो, यति छिटो जाँदो रहेनछ । त्यसैले वातावरण अझै बारुद बारुद गन्हाउँछ ।
जंगल परित्याग गर्नु सानो कुरा होइन । त्यति ठूलो जोखिम बटुल्ने साहसिकता आफैंमा महान् हो । त्यस्तै महान् लाग्यो जंगली संस्कारबाट मुक्त हुनु । बाघ जंगलभित्र मात्रै बाघ भई बस्दैन सहर पस्दा पनि बाघै भएर छिर्छ । त्यसकारण कुरो जंगल र सहरको होइन हामीभित्र अवस्थित संस्कारको हो, जसले जंगल सहर भइदिन्छ, सहर जंगल ।
लक्ष्मी, उत्सव र हुरी
अब त जोडौ घरवार
मन लाग्छ, लाग्दैन
फेसबुक च्याटिङमा श्रृङ्कारकाण्ड (भाग एक)